နေထက်လင်း – မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ရွာအဆင့်-မူလတန်းအဆင့်လို့ထောက်ခံပြောဆို – PAPAWADY
နေထက်လင်း – မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ရွာအဆင့်-မူလတန်းအဆင့်လို့ထောက်ခံပြောဆို
ရုပ်ရှင်မင်းသားက နေထက်လင်းကတော့ ပြတ်ပြတ်သားသား ပရိသတ်အများစုပြောတာကိုထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။ Mcn Tv နဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ နေထက်လင်းက မြန်မာရုပ်ရှင်လောက ရွာအဆင့်ပဲရှိတယ် ဆိုတာကို လက်မ ၂ ချောင်းထောင်ကာ ထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အပြင်ကို ထပ်လောင်းပြီး မူလတန်းအဆင့်ပဲရှိတယ်လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ နေထက်လင်း က တဖက်မှာ The Lady ကားကို ဘယ်လိုရိုက်လဲဆိုတာကြည့် ၊ ပညာတွေအများကြီးရတယ်ဆိုကာယှဉ်ပြထားပါသေးတယ်။ ဆက်လက်ပြီး “လောကကြီးမှာ ကိုယ်ညံ့တာကို ရှက်လို့မပြောဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူ ဘယ်တော့မှမတိုးတက်ဘူးဆိုကာ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်”။နေထက်လင်းက တော့လုံးဝထောက်ခံတယ် လက်မ ၂ ချောင်းပြီးထောက်ခံတယ်ဆိုပြီး အားပါးတရ လုံးဝထောက်ခံသွားတာပါ။(ပပ၀တီ) ဒါအပြင် ပရိသတ်တွေက အကယ်ဒမီပေးပွဲတွေမှာ မမြင်တာကြာပြီနေထက်လင်းကို ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုမေးရာမှာ အကယ်ဒမီပေးပွဲတက်ချင်လို့ မနှစ်က ကိုလူမင်းဆီမှာ ဖိတ်စာသွားတောင်းတော့ မပေးဘူး ။ အကယ်ဒမီပေးပွဲမတက်ဖြစ်တာ နှစ် (၂၀)လောက်ရှိပြီ ။ ဖိတ်စာမရလို့ပါ ” ဆိုပြီးတော့ အကယ်ဒမီပေးပွဲ မတက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကို Myannmar Cele7နဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အင်တာဗျူးမှာ ရှင်းပြထားပါတယ်။
ဒါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပရိသတ်တဦးဖြစ်တဲ့ ပီနန်းမွဂ့်ဟွမ်င်္လင်း ရဲ့ ကွန့်မန့်တခုက ရေပန်းစားနေပါတယ်။ ရေးထားတာကဒီလိုပါ။ ဖိတ်စာ တစ်စောင် ၁သိန်း မပေး ရဘူး ထင်တယ်နော်ပေး ရရင် အာ့ ဦးနေထက်လင်း ကို ပေးရမဲ့ ဖိတ်စာ ရိုက်ခစင်ကာပူကနေ ငါ လှမ်းပို့ပေးမယ်။ကိုယ်တေ ငယ်ငယ်လေးထဲက. နေထက်လင်း ကားဆို အလုအယှက် လက်မှတ်ဝယ်မရ ရင် ခုံတိုးကြည့်ခဲ့ရတာ အံ့ သြလို့ မဆုံးဘူး ဘာမဟုတ်တဲ့ နို့ နှစ်လူံး ဖင် ပြောင်လှန် ဖာသည်သာသာတေငပေါတေကျ စောက်ခြောက်တေကျ တက်လိုက်တာတက်လိုက်တာ ဘီလူး သရဲ ရုပ်တေနဲ့ကောင်းတယ် မြန်မာ ပေါကားလို့. အပြောခံရတာ သာသာနာနာ ပြောထည့်ပေးတာ။ပြောလိုက်ရင် ဆဲ မိတော့မယ်ခု မီဒီယာ ပေါ် ပြောခံ လိုက်ရမှ ဖိတ်စာ ရောက်ခဲ့ မယ်ဆို ဦး နေထက်လင်း ရေ အာ့ ဖိတ်စာ အီး သာ ကုန်း ပစ်လိုက် အာ့လိုပဲ ပီနန်း ပြောချင်တယ် အာ့တောင် သေချာ ကြည့် ဖိတ်စာတောင် မြန်မာ ပေါ ကားတေ ဆိုတဲ့ အတိုင်း အပေါစား ဖိတ်စာ နဲ့ တိုးနေမှ ဖျင် ပွန်းသွားမယ် ဦး နေထက်လင်း ဆိုပြီး နေထက်လင်း အတွက် စိတ်နာနာနဲ့ ရေးသားထားပါတယ်။
ရုပျရှငျမငျးသားက နထေကျလငျးကတော့ ပွတျပွတျသားသားပါပဲ။ Mcn Tv နဲ့တှဆေုံ့ရာမှာ နထေကျလငျးက မွနျမာရုပျရှငျလောက ရှာအဆငျ့ပဲရှိတယျ ဆိုတာကို လကျမ ၂ ခြောငျးထောငျကာ ထောကျခံတယျဆိုတဲ့အပွငျကို ထပျလောငျးပွီး မူလတနျးအဆငျ့ပဲရှိတယျလို့ပွောဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။ နထေကျလငျး က တဖကျမှာ The Lady ကားကို ဘယျလိုရိုကျလဲဆိုတာကွညျ့ ၊ ပညာတှအေမြားကွီးရတယျဆိုကာယှဉျပွထားပါသေးတယျ။ ဆကျလကျပွီး “လောကကွီးမှာ ကိုယျညံ့တာကို ရှကျလို့မပွောဘူးဆိုရငျအဲ့ဒီလူ ဘယျတော့မှမတိုးတကျဘူးဆိုကာ ထပျလောငျးပွောကွားခဲ့ပါတယျ”။နထေကျလငျးက တော့လုံးဝထောကျခံတယျ လကျမ ၂ ခြောငျးပွီးထောကျခံတယျဆိုပွီး အားပါးတရ လုံးဝထောကျခံသှားတာပါ။ဒါအပွငျ ပရိသတျတှကေ အကယျဒမီပေးပှဲတှမှော မမွငျတာကွာပွီနထေကျလငျးကို ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာကိုမေးရာမှာ အကယျဒမီပေးပှဲတကျခငျြလို့ မနှဈက ကိုလူမငျးဆီမှာ ဖိတျစာသှားတောငျးတော့ မပေးဘူး ။ အကယျဒမီပေးပှဲမတကျဖွဈတာ နှဈ (၂၀)လောကျရှိပွီ ။ ဖိတျစာမရလို့ပါ ” ဆိုပွီးတော့ အကယျဒမီပေးပှဲ မတကျဖွဈတဲ့အကွောငျးရငျးကို Myannmar Cele7နဲ့တှဆေုံ့တဲ့အငျတာဗြူးမှာ ရှငျးပွထားပါတယျ။
ဒါနဲ့ပတျသတျပွီး ပရိသတျတဦးဖွဈတဲ့ ပီနနျးမှဂျ့ဟှမျင်ျလငျး ရဲ့ ကှနျ့မနျ့တခုက ရပေနျးစားနပေါတယျ။ ရေးထားတာကဒီလိုပါ။ ဖိတျစာ တဈစောငျ ၁သိနျး မပေး ရဘူး ထငျတယျနျောပေး ရရငျ အာ့ ဦးနထေကျလငျး ကို ပေးရမဲ့ ဖိတျစာ ရိုကျခစငျကာပူကနေ ငါ လှမျးပို့ပေးမယျ။ကိုယျတေ ငယျငယျလေးထဲက. နထေကျလငျး ကားဆို အလုအယှကျ လကျမှတျဝယျမရ ရငျ ခုံတိုးကွညျ့ခဲ့ရတာ အံ့သွလို့ မဆုံးဘူး ဘာမဟုတျတဲ့ နို့ နှဈလူံး ဖငျ ပွောငျလှနျ ဖာသညျသာသာတငေပေါတကြေ စောကျခွောကျတကြေ တကျလိုကျတာတကျလိုကျတာ ဘီလူး သရဲ ရုပျတနေဲ့ကောငျးတယျ မွနျမာ ပေါကားလို့. အပွောခံရတာ သာသာနာနာ ပွောထညျ့ပေးတာ။ပွောလိုကျရငျ ဆဲ မိတော့မယျခု မီဒီယာ ပျေါ ပွောခံ လိုကျရမှ ဖိတျစာ ရောကျခဲ့ မယျဆို ဦး နထေကျလငျး ရေ အာ့ ဖိတျစာ အီး သာ ကုနျး ပဈလိုကျ အာ့လိုပဲ ပီနနျး ပွောခငျြတယျ အာ့တောငျ သခြော ကွညျ့ ဖိတျစာတောငျ မွနျမာ ပေါ ကားတေ ဆိုတဲ့ အတိုငျး အပေါစား ဖိတျစာ နဲ့ တိုးနမှေ ဖငျြ ပှနျးသှားမယျ ဦး နထေကျလငျး ဆိုပွီး နထေကျလငျး အတှကျ စိတျနာနာနဲ့ရေးသားထားပါတယျ။
Posted in သတင်း, အနုပညာရှင်Tagged နေထက်လင်း, မြန်မာရုပ်ရှင်
၀တ်မှုံရွှေရည် – ဖက်ရှင်လေးကချစ်စရာ